धुम्रपान सधैका छोड्ने तीन उपायहरू | सुदुरपश्चिम खबर
यदि स्वस्थ रहन र लामो आयु बाँच्न चाहानुहुन्छ र धुम्रपान छोड्न चाहानुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिले धुम्रपान लत हो भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । त्यसपछि छोड्ने बारेमा योजना बनाउनुपर्छ । धुम्रपानको लत लागेको लामो समय भएको छैन भने तपाईंले त्यो लतलाई विस्तारै छोड्न सक्नुहुन्छ तर यदि तपाईं चे’न स्मो’कर हो भने डा’क्टरको सल्लाह तुरुन्तै लिन आवश्यक छ । धुम्र’पान छोड्नको लागि परिवार र साथीभाईको सहयोग लिनुपर्छ ।
धुम्रपानबाट छुटकारा पाउनको लागि सहकर्मीसँग कुराकानी गर्नुपर्छ र उनीहरुको पनि मद्दत लिनुपर्छ । त्यसैगरी धुम्रपान गर्ने संगतबाट टाढा रहनुपर्छ । त्यतिमात्र होइन, कहिले काँही मानिसहरु भावनात्मक आवश्यकता पूरा गर्नको लागि पनि धुम्रपान गर्ने बानी लागेको हुनसक्छ । त्यसको लागि एक्लै बस्ने गर्नुहुँदैन । आफ्नो नजिकको मान्छेलाई आफ्ना भावनाहरु सेयर गर्ने र धुम्रपानलाई वेवास्ता गर्ने गर्नुपर्छ ।
शरीरलाई पानी नभई हुन्न । शरीरका लागि स्वच्छ पानी आवश्यक छ । तर, अहिले हामीले पिउने पानी दूषित छ । हा’निकारक छ । विषाक्ता छ । त्यही कारण फिल्टर गरेर, उमालेर वा विभिन्न विधिबाट शुद्धिकरण गरेर पानी पि’उने गरिन्छ । काठमाडौं लगायत शहरी क्षेत्रको हकमा त रोगको स्रोत नै भएको छ, पानी ।
पानीको माध्यमबाट विभिन्न महामारी फैलने गरेको छ । ट्यांकीमा जम्मा गरेर घर-घरको धारामा आउने पानी होस् वा ट्यांकरले आपूर्ति गर्ने पानी नै, स्वच्छ हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । यस्तो पानीले हाम्रो स्वास्थ्यलाई नाजुक बनाउँदैछ ।
यस्तो अवस्थामा हामीले विश्वास गरेको भनेको प्रशोधित पिउने पानी हो, जो बजारमा सहजै पाइन्छ । बो’त्तलमा पाइने ति पानी हामी निस्फिक्री घटघट पिउँछौं । त्यसलाई अतिरिक्त शुद्धिकरण गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन, न त उमाल्नुपर्छ भन्ने नै ।
तर, खतरनाक बोत्तलको पानी ! हामीले बजारमा ‘मिनिरल वाटर’ भनेर पिउने वोत्तल बन्द पानी हानिकारक भएको हालैको एक शोधले खुलासा गरेको छ । एक त त्यसरी शु’द्धिकरण गरिएको पानीमा ‘मिनिरल’को मात्रा कति हुन्छ भनेर खुलाइएको हुँदैन । त्यो पानी कति पिउन यो’ग्य हो भनेर त्यसको गुणस्तर मापन गरिएको भएपनि त्यस्ता पानीको गुणस्तरप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
पानीमा ९३ प्रतिशतसम्म प्लाष्टिकको स-सानो टुक्रा बोत्तलमा भरिएको पानी मिनरलयुक्त वा शुद्ध छ भनेर सोच्नु नै भ्रमपूर्ण रहेको अध्ययनले बताएको छ । स्टेट युनिभर्सिटी अफ न्यूर्योकका वै’ज्ञानिकहरुले विश्वभरको बोत्तलबन्द पानीमा गरेको अध्ययनले निरासलाग्दो तथ्य सार्वजनिक गरेको छ ।
शोधकर्ताले चीन, ब्राजिल, इन्डोनेसिया, अमेरिका लगायत ९ देशमा बिक्री गरिने ११ अलग-अलग ब्रान्डको करिब २ सय ५९ प्याकेट बोत्तल जाँच गरेको थियो । उक्त जाँचमा के पाइयो भने, विश्वभर बिक्री हुने यस्ता प्याकेज्ड मिनिरल वाटरमा ९३ प्रतिशतसम्म प्लाष्टिकको स-सानो कण पाइयो ।
छिमेकी भारतमा समेत यस्तो पानी प्रशस्तै पाइएको छ । दिल्ली, चेन्नाई, मुम्बई लगायत १९ वटा स्थानको पानीको नामुनामा हानिकारक प्लाष्टिकको टुक्रा पाइयो । कुन कुन ब्रान्डको नमुना लिइयो ? यसको टप ग्लोबल ब्रान्डमा एक्वाफिाना, ईवायिन (फ्रान्सका चर्चित ब्रान्ड, जसको पानी भारतिय क्रिकेटर विराट कोहली पनि पिउँछन्, भारतयि ब्रान्ड बिसलेरी लगायत सामेल गरिएको छ ।
रिसर्च टिमका अनुसार चेन्नाईमा लिइएको बिसलेरी ब्रान्डको नमुनामा एक लिटर पानीमा ५ हजार माइक्रोप्लाष्टिक कण पाइएको थियो । ४५ प्रतिशत पोलीप्रो’पलीन प्याकेज्ड पानीका कम्पनीले आफ्नो पानीको शुद्धता एवं गुणवत्तामा केही दावी गर्ने गरेका छन् । तर यस सोधको परिणाम आएपछि भने उनीहरुको गुणस्तरमाथि औंला उठाइएको हो । बोत्तलको बिर्को बनाउने कम्पनीले पोलिप्रोपलिनको उपयोग गर्छ ।
यो पदार्थ पानीमा ५४ प्रतिशतसम्म पाइन्छ । दोस्रो नम्बर हो, नाइलन जो १६ प्रतिशतसम्म पाइएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको चासो बोत्तलबन्द पानी यति हानिकारक हुन्छ भन्ने त’थ्यांक बाहिर आएपछि विश्व स्वा’स्थ्य संगठनले पनि यस रिसर्चको स’मीक्षा गर्ने भएको छ ।
बोत्तलबन्द पानीले के हानी गर्न सक्छ त ? क्यान्सर प्लाष्टिकको बोत्तलको पानी क्यान्सरको कारण बन्नसक्ने चिकित्सकहरुले औल्याएका छ । प्लाष्टिकको बोत्तल जब घाम वा तापमानको कारण तातो हुन्छ, प्लाष्टिकमा रहेको हानिकारक के’मिकल डा’इअक्सिनको पानीमा घुल्छ । यो पानीको माध्यमबाट हाम्रो शरीरमा पुग्छ ।
डाइअक्सिनले हाम्रो शरीरको कोसिकालाई पुरा नष्ट गर्छ । यसले महिलामा ब्रेस्ट क्यान्सरको खतरा बढाउँछ ।मस्तिष्कलाई समेत असर प्लाष्टिकको बोत्तलमा पाइउने पानीमा जुन केमिकल हुन्छ, त्यसले मस्तिष्कको कार्यक्षमता पनि कम’जोर बनाउँछ ।
यसले स्मरण क्षमतामा ह्रास आउने भय छ । कब्जियतको कारण प्लाष्टिकमा राखिएको पानी सेवन गर्दा यसमा रहेन बाइसफेनोल एको कारण पेटमा एकदमै हानी पुग्ने बताइएको छ । बीपीए नामक रसायन जब पेटमा पुग्छ, तब यसले पाचन प्रक्रियालाई प्रभावित गर्न सक्छ
यसले ग्याष्ट्रिकको गराउँछ । गर्भपतनको खतरा पानीमा घुलेको स-सना प्लाष्टिकको कणले महिलामा गर्भपतनको खतरा बढाउँछ । गर्भवती महिलालाई यसको निकै असर देखिएको छ । जन्म दोष बोत्तलमा राखिएको पानीमा हुने रसायनले भ्रुणको बच्चालाई समेत असर गर्ने बताइएको छ । यस्ता पानीको सेवनले भू्रणको बच्चा असामान्य रुपमा पैदा हुने रिसर्चमा उल्लेख छ । (urlabarinews.com बाट साभार )
महेन्द्रनगरमा म्यूजिम संचालन